श्वेताले यति मोटो रकम खर्च गरेर गरेकी रहिछिन् विजेन्द्रसंग दोश्रो बिहे, खर्च विवरण सार्वजनिक(भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचारश्वेताले यति मोटो रकम खर्च गरेर गरेकी रहिछिन् विजेन्द्रसंग दोश्रो बिहे, खर्च विवरण सार्वजनिक(भिडियो हेर्नुहोस्)
January 10, 2021 admin समाचार 7669
नायिका श्वेता खड्काले करोडपति ब्यब’सायीका छोरा विजयेन्द्रसँग धुमधामले दोश्रो विबाह गरेकी छन् । सिन्धुपाल्चोकमा माझीबस्ती नि’र्माण गरिसकेकी नायिका खडकाले विजयेन्द्रसँग धुमधामले नेपालको सबैभन्दा महंगो ५ तारे होटल गोकर्ण रिर्सो’टमा बिहे गरेकी थिईन् । श्वेता र विजयेन्द्रको विबाह १ करोडको हारा’हारीमा खर्च भएको रहेछ ।
३ दिनसम्म चलेको विबाह नेपाली चलचित्र उद्यो’गकै सर्वाधिक महंगो बिहे भएको बताइन्छ । जुन विबाहलाई अहिलेसम्मको भव्य विबाह भएको समेत बताइन्छ । धुमधामले विबाह सकिए ल’गत्तै श्वेता पनि विजयेन्द्रका साथ परिवारका सबै सदस्यहरुसँग अन्तर’वार्तामा देखिएकी छिन् । एक युट्युवसँगको कुरा’कानीका क्रममा श्वेतालाई उनकी सासुले श्वेतालाई बुहारीको रुपमा नभई छोरीको रुपमा स्वि’कारेको बताएकी छिन् ।
श्वेताकी सासुले श्वेता आफ्नो कान्छो छोराको पेमिकाका रुपमा घरमा आएका का’रण श्वता बुहारीका रुपमा भित्रिए पनि आफ्नो छोरी नभएका कारण पनि श्वेतालाई छोरीकै ब्य’बहार गर्ने उनले बताइन् । सो अवसरमा श्वेताका ससु्राले श्वतेतालाई बुहा’रीको रुपमा स्विकार्न पाउँदा आँफुहरुको छाती पनि चौडा भएको बताए । त्यस्तै श्वेताका जेठाजु दिपेन सिंह रावतले श्वेतालाई बुहा’रीको रुपमा स्विकार्न पाउँदा निकै खुशी लागेको बताए ।
त्यस्तै श्वेताका पति विजयेन्द्र सिंह रावतले आँफुले श्वेतालाई प्र’स्ताव राखेको र श्वेताले आफ्नो प’रिवारको नाम अझै उज्जल बनाउन भूमिका खेलेको बताए । खुशी आँफुले नदिई श्वेताले दिएको तर आँफुले श्वेतालाई मन पराएर साथ दिएको विजयेन्द्रले बताए । विजयेन्द्रले आँफुहरुले पछिल्लो २ महि’नादेखि लुकेर डेटिगं गरिरहेको समेत उक्त अन्तरवार्तामा बताएका छन् ।
उक्त अन्तर’वार्तामा श्वेताकी जेठानी दिदी सुजताले पनि रावत परिवार निकै शान्त, सभ्य र ब्य’बस्थित बनेको बताइन् । श्वेताकी सासुले सुजातालाई हुनेवाला जेठी बुहारी भनेर परिचय गराइन् । सुजाताले औपचारिक रुपमा वि’बाह नगरेको भएतापनि परिवारले भने स्विका’रिसकेको छ । – इताजा खबरबाट
११ कक्षाकी विद्यार्थीलाई परिक्षा दिन हिँड भन्दै शिक्षकले होटलमा लिएर गए, त्यसपछि… (भिडियो हेर्नुहोस्)
अ’तालिदै बाउ छोरीको भित्री सम्बन्ध बारे बिनयकी श्रीमतिले पोल खोलिन् (भिडीयो हेर्नुहोस्)
तनहुँकी इन्दिराले २ वर्षकी छोरीलाई यसरी बाघको पन्जाबाट खो’सीन्(भिडियो हेर्नुहोस्)
December 24, 2020 admin समाचार 9205
तनहुँकी इन्दिरा न्यौपाने एक म’हान् आमा हुन् । उनले साँझको ७ बजे तीर धारामा जाँदा छोरीलाई साथ’मा नै लिएर धारामा गइन् । धारामा पानी भर्न लागेका बेला एक्का’सी आएको बाघले उनकी २ वर्षकी छोरीलाई मु’खमा
३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा १५ करोड बढी पटक हेरेर रेकर्ड राख्यो, स्वस्तिमाको चर्चित गीत कुटुमा कुटुले
June 5, 2021 admin समाचार 4497
काठमाडौं । संगीत’कार राजनराज शिवाकोटी यतिबेला सर्वाधिक खुसी छन् । आफ्नो पछिल्लो गीत फुलबुट्टे सारीको सफलता’पछि उनको अर्को एउटा गीतले नेपालमा अहि’लेसम्मकै सबैभन्दा बढी हेरिएको गीतको रेकर्ड बनाएको छ । चलचित्र दुई रुपै’याँको कुटुमा कुटु
अब निकै सस्तो मूल्य’मा आउँदै छ, नयाँ मोडलको ‘बुलेट बाइक’
September 23, 2020 admin समाचार 12137
बेलायती मोटर’साइकल उत्पादक कम्पनी रोयल इन्फिल्डको बुलेट बाइक नेपाली बजारमा पनि निकै लोकप्रिय मानिन्छ । भारतीय बजारमा उत्पादन हुँदै आएको रोयल इन्फिल्डका बाइक नै नेपाली ब’जारमा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (241996)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229901)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229528)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227903)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226697)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226276)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (196978)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194297)